Ukwenza umbulali kuNicky Verstappen - Jos Brech PsyOp: UMartin Vrijland
Uchungechunge lweNetflixUkwenza umbulali'ibonisa indlela abantu abangabambelelwa ngayo kwizigqibo ezingalunganga iminyaka. Xa i-DNA kule ngqungquthela ihlala yinto ehlengahlengayo, i-DNA ingaba ngumgaqo omtsha Ukwenza umbulali sekelwe. Ngomsebenzi wengqondo (PsyOp) uqinisekisa ukuba abantu badlala kunye nemvakalelo, ukwenzela ukuba uvuselele ukunyanzeliswa kwintlanzi efuna imithetho emitsha. Ungasebenzisa imidiya yakho ukuba idlale abantu, ngokomzekelo, ityala lokubulala. SinoPeter R. de Vries ngenxa yoko.
Unokuphinda uvelise ubugonyamelo ngokwakho. Ukwenza oku ngo-Peter R. de Vries ofanayo, amaphephandaba kunye neendaba. Ubeka umfanekiso womntu ozingela abantwana ozama ukufihla entlango. Emva koko uyaqinisekisa ukuba wonke umntu ubona isisombululo kwigama eliphambili le-DNA. Kwaye ngoko unokwenza lula ukuba usebenzise umthetho omtsha apho izinto ezingekho ngokusemthethweni zenzeke ngokukhawuleza. Umzekelo wale nto kukuba unako ukwenza unyanzelekile ukuthatha i-DNA okanye ukuyifumana kwindlu yomntu. Omnye umzekelo kukuba unokutshintshela umgaqo othi unokusebenzisa kuphela ubungqina be-DNA kwimeko ekubhekiselwe kuyo. Enyanisweni ungathanda ukuya kwimeko apho unayo iDNA yelizwe lonke kwi database kwaye ungasebenzisa i-DNA nanini na, naphi na. Yaye ngubani ochasene naloo nto emva kwemiba enjalo? Akukho mntu!
Uyazi njani i-PsyOp? Ukuba kukho izinto ezibonakala ngathi ziyinto engaqhelekanga kwaye - ukuba awukho ngaphantsi kwe-media hypnosis - ubuncinane ukwenza ukuba ucinge "Hayi, into ehambelanayo!". Kodwa ungakhathazeki ukuba abezindaba baphinda ngokuphindaphindiweyo ngempendulo ecacileyo, ukuze uqale ukukholelwa kwakhona kwi-PsyOp. Isizathu sokuba sinokuthi sinokungqinelana ngokuqinisekileyo ukuba icala likaNicky Verstappen yi-PsyOp kukuba yonke into ibonisa ukuba ayenzi nantoni na yomthetho. Ukuba ufuna ukwazi ukuba kunjalo, kufuneka uhambe kuqala kwinqaku elidlulileyo ukufunda.
I-DNA yindlela entsha yemilingo yamapolisa kunye nobulungisa kwaye wonke umntu ugcwele udumo! Akunjalo kuba yinyani ngokusemthethweni okanye ngenxa yokuba inengqiqo, kodwa ngenxa yokuba ifakwe kumaphephandaba. Masicacile kwakhona: Ukufumana i-DNA emzimbeni okanye kwiingubo zithetha akukho nto ngaphandle kokuba i-DNA ifunyenwe kuyo. Umbuzo wukuthi kwenzeka njani. Ngako oko kunjalo njalo iimeko ezifunekayo inkxaso. Ukususela namhlanje nommelwane ngaphezu ikofu kwaye ifile ngomso kwikhaya lakhe, ngoko kukho amathuba ephakamileyo DNA yakho phezu isofa okanye iimpahla. Ngaba oko kuthetha ukuba umbulale? Akunjalo, ummelwane unokubanjelwa intliziyo okanye mhlawumbi wabulawa ngumnye umntu. Ingxelo ye-autopsy kufuneka ibonise ukuba yintoni isizathu sokufa. Ukuba unobangela wokufa khange sele kugqitywe yaye uPetros R. de Vries ngesiquphe ukhawulelwa eendaba ukuba kungenzeka kakhulu ummelwane mbulali kwaba DNA yakho iingubo zakhe, ngoko fed njengoko iplagi. Ngaba ulindele ukujongela iziphumo zecala le-media-hype elingakuchaphazela kwikamva?
Kodwa le yinkwenkwe evela kwi-11 kwaye ikwaxubusha nokuxhatshazwa ngokwesondo! Ngaba uyayicinga ukuba kungenzeka ukuba i-PsyOp? Oku kunokuthetha ukuba i-patsy (i-cat catcher) isetyenziselwa ukudlala indima yomenzi wobubi okanye ukuba umntu ukhethwe ukubhala umenzi wobubi ngokufaka ubungqina obunjalo. Ukwenza umbulali.
Into ephawulekayo kukuba amapolisa ngoku avela ngcaciso ebalulekileyo ngewebhu 1Limburg.nl. OyiNtloko (ngeziqu zibaluleke kakhulu) Jan Eland uthi umntu Ungacela ukuba unikele DNA DNA Jos Brech abakwazileyo ukungqamanisa DNA iingubo ka Nicky Verstappen amalungu entsapho lomgca usapho yesine yesihlanu. Ngoko kufuneka ukuba yinto enye emva komva-emva komzala okanye Indodana-yentombi-ye-backneef-yase-Jos okanye into enjalo. Kwaye i-DNA yayiza kuvelisa umdlalo we-100% (jonga ividiyo ngokukhawuleza kwaye ufunde ngaphantsi kwevidiyo).
"Ekugqibeleni amadoda amabini avela kwintsapho yesine kunye neyesibini abuzwa ukuba banikele ngokuzithandela kwi-DNA kwiphando likaNicky Verstappen. La madoda asebenza kunye kwaye yaba ngumdlalo opheleleyo kunye nemifanekiso efunyenwe emzimbeni kaNicky Verstappen, "kusho isikhulu segosa uJan Eland malunga neL1. (catshulwa 1Limburg.nl)
Ngaba unayo nayiphi na ingcamango ukuba kuninzi kangakanani ukungabikho nto kule ndawo ethandwayo? Ukuba i-DNA yala madoda ivelise umdlalo we-100%, ingaba nabo bangabenza izinto ezimbi! Umdlalo opheleleyo uthetha ukuba i-DNA yakho ihambelana ngokupheleleyo ne-DNA efunyenweyo (kwizinto ezingabonakaliyo zokugqoka). Yintoni enokwenzeka ukuba i-DNA inezinye 'ukufana', oku kunokukhokelela ekukrokheni kwicala likaJos Brech, kodwa eli likhulu ligosa lithetha umdlalo opheleleyo. Ngoko ke sino 3 abenzi okubulala ezenziwa soze (ngokuba akukho wabonisa yotyando yi NFI) kunye nokuxhatshazwa ngesondo akazange ndawo (ngokuba akukho wabonisa yotyando yi NFI). Kukho, emva kwako konke, ngokwamazwi esemthethweni umdlalo epheleleyo kunye omabini la madoda mabini ukusuka kumgca usapho yesine neyesihlanu njengoko Jos Brech.
Kucelwa uqaphele kwakhona la manqaku alandelayo kwinqaku elifanayo kwi-1Limburg malunga noJos Brech:
.. njengomntu odlulileyo kwimeko yolwaphulo-mthetho wabonwa kwaye kwixesha elidlulileyo libandakanyeka kwisenzo socalulo
Ukuba uye wabandakanyeka kwimeko, kodwa ungagwetywa, awukho wesondo. Into oyiyo umxhaphazi womntu wesondo ocetyiswa ngu-Peter R. de Vries. Umfanekiso kaJos Brech uye waphonywa waya kwiindawo eziphakamileyo kwaye intsapho ifuna ukubheka le ndoda ejongweni! Ngokuqinisekileyo ukuba wakwenza! Wenzani? UJos Brech ungumbulali wokubulala ngokungekho mthethweni kunye nomxhaphazi wesini sokuziphatha kakubi ngokwesini. "UEwe, kodwa uPeter R. de Vries uthi uNicky wabulawa kwaye wasetyenziswa kakubi!"Ewe, nguloo nto uPetros R. de Vries athi, yiloo nto abazingeli be-OM abayithetha ngayo kwaye yiloo nto i-propaganda media ithi. Ndiyanitshela ukuba kulula nje nge-PsyOp.
Into eqinisekileyo yinto yokuba umthetho omtsha uza kufakwa oya kuqinisekisa ukuba wonk 'ubani uya kuphelisa iDNA yabo kwaye ukuba le DNA isenokusetyenziswa rhoqo ngokusemthethweni nakwezinye iindawo. I-PsyOp ikuqaphela ngumbandela wokuthi ingxaki yenziwe, impendulo iyashukunyiswa kwaye ke isisombululo sichazwe ngokuba sele usesitheleni: Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo.
Ukususela ngoku, ngaba ubeka i-hairnet kunye neiglavu zeerubha xa usaya kwikhofi nommelwane?
Uludwe lwekhonkco lovimba: 1limburg.nl
tags: Dna, eziziimbalasane, ubuxoki obenziwe ngamasibomu, UJan Eland, Jos Brech, umbulali, UNicky Verstappen, UPeter R. de Vries, psyop
30 Agasti 2018 kwi-10: 41
« UJos Brech ngu-100% umbulali kunye nomxhaphazi wezocansi kaNicky Verstappen kwaye kufuneka utyunjwe esidlangalaleni!
I-DNA igama lomlingo elixazulula yonke into yokubulala nokuxhaphazwa ngokwesondo! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.891.179
UMartin Vrijland op Ngaba inkqubo ye-Iranian yokulwa nenqwelomoya eyathatha i-Boeing 737-800 (indiza ye-PS752) iphoswe?